Dhalinyaro Soomaali Ah Oo Lagu Xidhay Dalka Canada | Haqabtire News
Dhalinyaro Soomaali Ah Oo Lagu Xidhay Dalka Canada
July 19, 2018 - Written by Warbaahinta Haqabtire
Ottawa:-(HTN) Ciidammada la dagaalanka hubka iyo budhcada dalka Canada ayaa xabsiga u taxaabay oo xidhay Lix dhalinyaro Soomaali ay ka mid ahaayeen kuwaa oo loo shakiyay in ay heysteen hub sharci-darro ah.
Dhalinyarradan ayeey ciidammadu ka soo qabteen guri ay ku sugnaayeen oo ku yaala bartamaha magaalada Toronto ee dalkaasi Canada, sidoo kale guriga dhalinyaradan laga soo xidhay ayaa la helay hub.
“Booliska magaalada ayaa galay guri waxa ay ka soo qabteen Lix dhlinyro ah, dhinac marka aad ka eegto waa wax wanaagsan in ammaanka la sugo, balse dhinaca kale waa wax laga naxo in dhalinyaro Soomaali ah ka mid noqdaan dadka hubka sharci darrada ah lagu qabtay.” ayuu yidhi Sadiiq Cali Xaashi oo ka mid ah dhalinyarada wax baratay ee ku nool dalka Canada.
Magacyada dhalinyaradan la qabtay oo warbaahinta lagu soo bandhigay ayaa waxaa ka muuqday dhaliynaro Soomaali ah oo qeyb ka noqonaya dadka ku eedeysan in ay si sharci darro ah u heysteen hub, taasoo ah danbi.
Xadhiga dhalinyarada asalkoodu uu ka soo jeedo Soomaaliya ee dalka Canada ayaa marar badan oo hore siyaabo kala duwan u dhacay.